January 2, 2021 - Khitalin Media
January 2, 2021 by Khitalin Media
မင်္ဂလာဦးညတွင်မင်္ဂလာဦးမောင်နှံအတွက် ညစာစားဖို့လင်ဗန်းအကြီးတစ်ခု၌ အလွန်ကောင်းပြီး အနံ့အရသာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အစားအသောက်များကို စားသုံးဖို့အခန်းတစ်ခုမှာအဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။ သတို့သားက သတို့သမီးကိုစားသောက်ဖို့ခေါ်တော့ သတို့သမီးကမေးတယ်…. ရှင့်အမေကော မစားဘူးလား.…?ခေါ်လိုက်ပါ အတူတူ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း စားလိုက်ကြရအောင် …. သတို့သားက အမေ အိပ်သွားပြီးထားလိုက်ပါ။ငါတို့နှစ်ယောက်ပဲ စားလိုက်ကြရအောင်…ဇနီးက ထပ်ပြောတယ်။ ကျွန်မသိတယ်ရှင့်အမေလည်း ထမင်း မစားရသေးဘူးခေါ်လိုက်ပါ အတူစားရအောင်ပြောတော့..အိပ်ပါစေ ထားလိုက်ပါကွာဟုပြောတယ်။ ထိုအခါ သတို့သမီးက ထပ်ဖန်တလဲလဲအမေကိုခေါ်ဖို့ ပြောပေမယ့်သတို့သားကလည်း ထပ်ဖန်တလဲလဲ…. ငြင်းဆိုရာကနေ နောက်ဆုံး သတို့သမီးက သူမကိုကွာရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သားအချင်းများရာကနေကွာရှင်းပြတ်စဲ လိုက်ကြတဲ့အခြေသို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့တယ်။ လမ်းခွဲကြပြီးနောက် သူတို့နှစ်ဦးဟာကိုယ်စီ နောက်အိမ်ထောင်ထူထောင်လိုက်ကြတယ်။ အမျိုးသမီးက သူမရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေတယ်…။ နှစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ သူမကနေရပ်ကိုပြန်လာတော့သားသမီးတွေကလာရောက်ကြိုဆိုကြပြီး အိမ်ပြန်လာကြတယ်။ လမ်းခုလတ်တနေရာမှာ လူတစ်ယောက်ဟာ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်တဲ့ အဝတ်အစားဝတ်ဆင်လျက်….. … Read more
ရင်သားတွဲကျခြင်းကို တင်းရင်းအောင် ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၂ )မျိုး
ရင်သားတွဲတာ ၊ နှစ်ဖက်မညီတာဟာ အိမ်ထောင်သည် ၊ ကလေးအမေတွေမှဖြစ်လေ့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး ။ နေထိုင်စားသောက်ပုံမှားယွင်းမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒီလို ရင်သားတွဲကျမှုအတွက် ထိရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် ။ ပထမဆုံး အိမ်တွင်း နည်းလမ်းကောင်းတွေ အများကြီး ရှိပေမယ့် အကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လူသုံးများတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြပေးပါမယ်နော် ။ လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းကတော့ တစ်မျိုးတည်းပါပဲ ။ အဲ့ဒါကတော့ သံလွင်ဆီစစ်စစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပထမဦးစွာ အိပ်ရာပေါ်လှဲပြီး ကျောနောက်မှာ ခေါင်းအုံးခံထားလိုက်ပါ ။ ထို့နောက် သံလွင်ဆီ အနည်းငယ်ကိုယူပြီး ရင်သားပေါ် ပွတ်လိုက်ပါ ။ ပြီးလျှင် ရင်သားကို စက်ဝိုင်းပံစံအတိုင်း နှိပ်နယ်ပေးရပါမယ် ။ နှိပ်တဲ့အခါ လက်နှစ်ဖက်စလုံးက ရင်သား တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ … Read more
ယနခေ့တျေ ထီပေါကျတဲ့သူမြား အထူးသတိထားရမယျ့ အခကျြလကျမြား
ယနခေ့တျေ ထီပေါကျတဲ့သူမြား အထူးသတိထားရမယျ့ အခကျြလကျမြား ၁။ ၁ ရကျနမှော ထီထှကျပါက ထီပေါကျလို့ သတငျးလာယူသူမြားကို ထီပေါကျသူမြားက သတငျးလာယူသူမြားကို ကိုယျရဲ့ ဘဝကွောငျးကို ပွညျ့စုံစှာ မပွောပါနဲ့ ။ ၂။ သတငျးယူသူမြားက လညျး ထီပေါကျသူမြား၏ မကျြနာမြားကို အနညျကငျြး ဖွတျပီ တငျပေးပါရနျ အခုခတျေမှာ လူလိမျ လူညာ လူမိုကျ သနေတျ ပေါတဲ့ခတျေဖွဈနပေါသညျ။ ၃။ ထီပေါကျသူရဲ့ ဘဝကွောငျးကို လိုငျးပျေါတငျခွငျးဟာ အားနညျခကျြသိရငျ မလိုသူမြားက လိုငျပျေါမှာ အမွဲရှိပါတယျ။ ၄။ အသကျ အန်ဒရာယျပါ စိုရိမျရပါတယျ။ အထူး သတိထားပါ အမြားကွီးမရတေော့ ပါဘူး။ ဒီလောကျဆို သဘောပေါကျကွမှာပါ ထီပေါကျလို နိုငျငံတျောကတငျတာက ပွညျပွညျ့စုံစုံမတငျပါဘူး။ အမညျ မှတျပုံတငျလောကျပဲ တငျတာပါ … Read more
သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာ သက်သေပြနေတဲ့ အမှန်တရား (၄) ခု
အချစ်ရေးတစ်ခုဟာ အဆုံးသတ်တဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ့်ဖက်က ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ ကြိုးစားကြိုးစား အဆင်ပြေနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေမှာ သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ တွဲနေပေမယ့်လည်း သင်တို့ကြားမှာ အချစ်မရှိတော့တာမျိုးလည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ သက်သေ ၄ ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေသင်တို့ကြားမှာဖြစ်နေရင်တော့ တခြားတစ်ယောက်ကို ပြောင်းချစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ (၁) ဘာမှအလိုမကျတော့ဘူး သင့်စိတ်ထဲမှာ သင့်ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလိုမကျတာတွေ အရမ်းများနေပါလိမ့်မယ်။ သူလုပ်သမျှအရာရာတိုင်းက သင့်စိတ်ထဲမှာ အလိုမကျစရာတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတော့မှာပါ။ သူဘာပဲလုပ်လုပ် ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ သင့်ကို ရန်စနေတယ်၊ သင့်ကိုအရွဲ့တိုက်နေတယ်၊ သင့်ကို စိတ်တိုအောင် ဆွနေတယ်ဆိုပြီး ခံစားနေရမှာပါ။ ဒီလိုအလိုမကျမှုတွေများလာရာကနေ စိတ်တွေတို၊ ဒေါသတွေချည်းပဲထွက်နေရပြီး သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပျော်စရာတွေထက် ဒေါသထွက်စရာတွေပဲ များများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အမြဲတမ်းဒေါသတွေထွက်နေရတယ် စိတ်အလိုမကျမှုတွေကနေ ဒေါသတွေပဲထွက်နေရတော့မှာပါ။ … Read more
အချစ်မှာ မျက်​စိ မရှိရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်း
လူတိုင်း ဘယ်​သူမဆို အနာဂတ်​မှာ ကြုံလာမယ့်​ ပြသနာကိုကြိုမြင်​မယ်​ဆိုရင်​ အဲဒီ ပြသနာဖြစ်​လာစေမယ့်​ လမ်းကိုလွဲဖယ်​ကြမှာပါပဲ။ ထိုနည်းတူပဲ ချစ်​သူနှစ်​ဦး ပေါင်းသင်းပြီး ငါးနှစ်​ အတွင်းကြုံလာမယ့်​ ပြသနာတွေကို ချစ်​နေကြိုက်​နေတဲ့ အချိန်​ကတည်းက ကြိုတင်​ မြင်​တွေ့ သိရှိနိုင်​မယ်​ ဆိုရင်​။ ။အရမ်းချစ်​လှပြီ ဆိုတဲ့ ချစ်​သူနှစ်​ဦးဟာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်​ဖို့ဆိုတာ ၁၀ %တောင်​ မသေချာတော့ပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာ ၅နှစ်​အောက်​(များသောအားဖြင့်​) အိမ်​ထောင်​ရှင်​တွေ ၄၀% လောက်​က ကွာရှင်းပျက်​စဲကြတယ်​။ စိတ်​ဓာတ်​ရင့်​ကျက်​ပြီး ကလေးမျက်​နှာ ငှဲ့နိုင်​တဲ့သူတွေမှ အိမ်​ထောင်​ထိန်းသိမ်းနိုင်​ကြတာပါ။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ဘယ်​အသိုင်းဝိုင်းမဆို အိမ်​ထောင်​ပြုတဲ့သူတိုင်း အခက်​ခဲ ပြသနာတွေ အနည်းအများကြုံရကြပါတယ်​။ မေတ္တာကြီးတဲ့သူဘက်​က သို့မဟုတ်​ ဥာဏ်​ကြီးတဲ့သူဘက်​ကထိန်းသိမ်းနိုင်​လို့သာ အိမ်​ထောင်​သက်​ ကြာမြင့်​စွာ အိုမင်းမစွမ်းတဲ့ အထိ လက်​တွဲနိုင်​ကြတာပါ။ ဘာအခက်​ခဲ ပြသနာမှမကြုံလို့ လက်​တွဲနိုင်​တာ … Read more
ဆနျဆေးရညျနဲ့ ခေါငျးလြှျောဖွဈအောငျ လြှျောကွညျ့ပါ (သငျမသိသေးတဲ့ ဆနျဆေးရညျ ကောငျးကြိုးမြားနှငျ့ ပွုလုပျပုံ)
ဆနျဆေးရညျနဲ့ ခေါငျးလြှျောဖွဈအောငျ လြှျောကွညျ့ပါ (သငျမသိသေးတဲ့ ဆနျဆေးရညျ ကောငျးကြိုးမြားနှငျ့ ပွုလုပျပုံ) ဆနျဆေးရညျနဲ့ ခေါငျးလြှျောဖွဈအောငျလြှျောကွညျ့ပါ(ဆနျဆေးရညျ ကောငျးကြိုးမြားနှငျ့ ပွုလုပျပုံ) ဆနျဆေးရနေဲ့ ခေါငျးလြှျောဖွဈအောငျ လြှျောကွညျ့ပါ …။ ဆနျဆေးရေ ဆိုတာဟာ ကြှနျတျောတို့ နစေ့ဉျစားတဲ့ ဆနျကို ထမငျးအဖွဈမခကျြခငျမှာ ရနေဲ့ ဆနျကို ဆေးရာကနေ ရတဲ့ ရပေါ။ ကြှနျတျောတို့ အတျောမြားမြားကတော့ ဆနျဆေးရကေို သှနျပဈကွလေ့ ရှိပါတယျ …။ သို့သျော ရှေးယခငျကတညျးက ဆနျဆေးရရေဲ့ အကြိုးအာနိသငျကို သိပွီး ဆနျဆေးရကေို အလှအပအတှကျသုံးခဲ့တဲ့ လူတှလေညျးရှိပါတယျ။ သုတသေနပညာရှငျမြားရဲ့ အဆိုအရ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ Heian ခတျေ (794 AD – 1185) မှာ ဂပြနျအမြိုးသမီးတှရေဲ့ … Read more
မပတ်သတ်မိခင်မှာ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို ပျိုမေတို့ သိရှိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀) ချက်
ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့်သူ သို့မဟုတ် ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်က လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာကို ပျိုမေ တို့ စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ရည်းစားများတဲ့ လူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်မိရင် ပထမဆုံးထိခိုက်နစ်နာရမှာက ပျိုမေတို့ဖြစ်ပြီးတော့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက် နောင်တရစရာ စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ယခုလို လူရှုပ်တစ်ယောက်ကို မရွေးချယ်မိဖို့အတွက် သူဟာလူရှုပ်လူပွေတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို သတိထားမိစေနိုင်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်ကို မျှဝေပေးပါရစေ။ ၁။ သင်နဲ့တွဲနေတာကို အခြားသူတွေ မမြင်လိုဘူး သင့်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်က တကယ်ချစ်တဲ့အခါ တကမ္ဘာလုံး သိအောင်ချပြဖို့လည်း ဝန်မလေးတတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သိခွင့်ပေးတာတွေ … သင့်အကြောင်းပြောပြတာတွေကို သူသေချာလုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ဟာသူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုလို အရမ်းကိုအရေးပါလို့ပါ။ တကယ်လို့သာ သင်နဲ့တွဲသာတွဲနေရတယ် လူတွေ့မခံချင်တာတွေ၊ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လူမသိအောင်ချိန်းတွေ့တာတွေ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုတွေကိုလည်း သိခွင့်မပေးတာတွေ လုပ်နေခဲ့ရင် … သင့်ကိုသူအပျော်သဘောမျိုးနဲ့ … Read more
2021 ခုနှစ်တနင်္လာသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း
2021 ခုနှစ်တနင်္လာသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း တနင်္လာသားသမီးတို့သည် 2021ခုမှာအဘက်ဘက်က အဆင်ပြေကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ရာထူးတိုးခြင်း၊နေရာကောင်းရခြင်းတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးအစုလိုက်ဝင်တတ်ပါတယ်။ အကျိုးတူ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ရလဒ်လဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်အလောကြီး စွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းများ ရှောင်ပါ။ တစ်ခုဆိုးတာက မိမိထက် ဉာဏ်ရည်၊လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ညံ့သူနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အထည်အလိပ် ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ချီခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ရေး၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အလှကုန် လုပ်ငန်း၊ ပရိဘောဂလုပ်ငန်း၊ ယာဉ်ကားရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများ၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အားကောင်း မည်။ လုပ်ငန်းခွင်တိုးချဲ့ရန် ဆန္ဒရှိသော်လည်း အနှောက် အယှက်များ အတိုက်အခံများရင်ဆိုင်ရပြီးမှ ချဲ့ထွင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းနေတာက ဒီနှစ်ဟာတနင်္လာသားသမီး တွေအတွက် ပျော်စရာ၊စိတ်ချမ်းသာစရာ အလွန်များပါတယ်။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုများ … Read more
ချစ်ပြီဆိုရင် အမျိုးသားတွေ လိုချင်တဲ့ အရာ (၆) ခု အစပိုင်းမှာ မသိသာပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီအရာတွေ မရတာကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နှစ်ဦးသားချစ်မိပြီဆိုရင် အမျိုးသား တွေ လက်တွဲဖော် ဆီက မျှော်လင့်တဲ့အရာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ စစတွဲချင်းမှာ ဒီအရာတွေမရလို့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ အချိန်ကြာလာရင်တော့ ပြဿနာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မဝေးနိုင်တဲ့အခါ နှစ်ဦးသား ပြဿနာ က တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ယောကျာ်း တစ်ယောက် မျှော်လင့်တတ်တာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ( ၁ ) လေးစားမှု လေးစားမှု နဲ့ လူ အထင်ကြီးခံချင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသား တွေဟာ သူတို့ လက်တွဲဖော် က လေးစားတဲ့အပြုအမူမျိုးပြတဲ့အခါ အဆိုပါ လေးစားမှု … Read more